Faly ny Minisiteran'ny Fizahan-tany Bahamas nandray ny fiverenan'ny Royal Caribbean International
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahamas » Faly ny Minisiteran'ny Fizahan-tany Bahamas nandray ny fiverenan'ny Royal Caribbean International
Ny Ministeran'ny fizahan-tany any Bahamas dia miandrandra ny fahombiazan'ny fitsangantsanganana an-tsambo any Bahamas amin'ity summe ity
Ny governemanta Bahamas sy ny minisiteran'ny fizahantany dia niara-niasa akaiky tamin'ny Royal Caribbean nandritra ny areti-mandringana COVID-19
Adventure of the Seas dia hitodika any Nassau
Faly ny Minisiteran'ny fizahantany miarahaba antsika mpandeha Royal Caribbean hiverina
The Ministeran'ny fizahan-tany sy fiaramanidina Bahamas faly eritreritra ny hiarahaba ny mpiara-miasa efa ela tao amin'ny Royal Caribbean International, satria nanambara ny sambo fitsangantsanganana anio fa i Nassau no homeport ho an'ny Adventure of the Seas, manomboka amin'ity volana Jona ity. Ny governemanta Bahamas sy ny minisiteran'ny fizahantany dia niara-niasa akaiky tamin'ny Royal Caribbean nandritra ny areti-mandringana COVID-19, ary faly indrindra fa mandray ny andraikiny lehibe amin'ny fiverenan'ny sambo fitetezana i The Bahamas.
Ny fitsangatsanganana an-dranomasina dia hiara-mody any Nassau ary hitsidika nosy fanampiny ao The Bahamas, ao anatin'izany ny Grand Bahama Island ary ny Perfect Day ao amin'ny CocoCay, toeram-pialan-tsasaran'i Royal Caribbean any Bahamas izay mampiasa Bahamians marobe. Midika izany fa na ny olom-pirenentsika manerana ny nosy aza dia afaka miverina miasa ary ny sehatry ny fizahan-tany manan-danja dia afaka manohy mankany amin'ny fanarenana. Efa ela no niandrasanay hihaona amin'ireo vahiny mpitsangatsangana, ary faly ny Minisitera mandray ireo mpandeha Royal Caribbean hiverina any amorontsiraka hiaina ny antony mbola tsaratsara kokoa any The Bahamas.
Faly izahay fa niasa sy niomana tamim-pahazotoana handray soa aman-tsara ireo mpitsangatsangana ary matoky izahay fa ny fiarahanay, miampy ny fepetra ampiharin'ny Royal Caribbean - ao anatin'izany ny fepetra takiana amin'ny vaksiny feno ho an'ny ekipazy sy ny mpitsidika rehetra - dia hanome traikefa vakansy tsy hay hadinoina. Eo am-piandrasana ny fiverenan'ny Royal Caribbean any amin'ireo nosy, ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina Bahamas, ny Hon. Dionisio D'Aguilar dia nilaza fa: "Ny toerana halehantsika dia vonona ary miandry ny hamerina ny andraikiny amin'ny faritra mandeha toerana itodihan'ny mpandeha mba handosirana sy hamelombelona. ”
Miaraka amin'ny fahatokisan'ny mpizahatany sy ny fizarana vaksinim-pandrosoana, ny Ministeran'ny fizahan-tany Bahamas dia miandrandra ny fahombiazan'ny fitsangantsanganana an-tsambo any Bahamas amin'ity fahavaratra ity.